Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha cudurka Covid-19 - Wardeeq 24 TV
Home Caafimaad-ka Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha cudurka Covid-19
Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha cudurka Covid-19
Ezra Acayan/Getty Images Caption: A healthcare worker prepares to administer Russian Sputnik V COVID-19 vaccine
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta Feyruska Karoona ku sheegtay in la diiwaan geliyay 97 xaalado cusub oo COVID-19 ah 24-kii saac ee la soo dhaafay, 6 qof ayaa u geeriyootay, waxaana ka bogsatay 97 ruux.
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa caddeysay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyay Somaliland (40), Puntland (23), gobalka Banaadir (20), Jubbaland (11) iyo Galmudug (3) qof ah, 40 ka mid ah bukaannada la xaqiijiyay waa rag, halka 57-na ay yihiin haween.
Tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay ayaa gaartay 17,399 waxaa bogsootay 8,460 Ruux. guud ahaan 969 ruux oo kale ayaa u geeriyootay cudurka.
Previous articleXisbiga waddani oo ka hadley baahiyaha Dadka dhimirka wax ka qaba.
Next articleXildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo Ansixiyey ka doodida Xeerarka shidaalka iyo shaqaalaha .